Doorka Haweenka & duruufaha ku xeeran (Qeybta 1aad) | ToggaHerer
← Somaliland Fursadaha ay haysato doorkeeda ma ka ciyaari karta isbedeladda ka socda Bariga Afrika?
Guddoomiyaha Gudiga Qandaraasyada oo Qodobeeyay Hawsha ay Qaranka u Hayaan →
Qormadan waxa aan kaga hadli doonaa haddii Eebe Idmo haweenka & kaalinta ay ku leeyihiin horumarka bulshada ee dhaqan dhaqaale, siyaasadeed iyo tariikh kooban oo si guud uga warameysa haweenka & ka qayb qaadashada dhisida bulsho. sidoo kale waxa aynu hoos u sii eegi doonaa Haweenka & sidii ay uga qayb qaateen fidinta diinta Islaamka & arrimo kale oo muhiim ahaa wakhtigii Rasuulka (NNKH) madaama aynu nahey umad 99% Muslim ah oo ay mar walba tahey in aynu qaadno dariiqii suubanaheena & asxaabtiisii. Intaa ka dib waxa aynu u jeedsan doonaa haweenka Soomaaliyeed doorka ay ku leeyihiin bulshada guud ahaan iyo kaalinta ay bulshada ugu jiraan uguna jireen wakhtiyadii inasoo maray.
Aadame markii la leeyahay ama dad waa laba qolo uun waa Rag iyo Dumar. Diinta, diirka iyo deegaanka haku kala gadisnaadaan balse labadaa wax aan ahayn oo dad ka kooban yahey soo heli maysid. Haddii aynu dib u raacno sidii ay ku yimaadeen Alle (SW) ayaa labadaba abuuray; iyada oo ay ka bilaabmeen Adan & Xaawa. Labadooda oo wada jira ayey dadku kasii beermeen. Habka & hanaanka dhalashada marka aynu eegno labadaba waxa caloosha lagu sidaa sagaal (9) bilood oo ah sidka Aadmaha.